VPN ကိုသုံးစွဲသူများအပေါ် Netflix နဲ့ကြေညာချက်များကိုအရေးယူ ! - သတင်း Rule
VPN ကိုသုံးစွဲသူများအပေါ် Netflix နဲ့ကြေညာချက်များကိုအရေးယူ !
လွှဝန်ဆောင်မှုအခြားဒေသများအတွက်လိုင်စင်အကြောင်းအရာကိုကြည့်မှထိုကဲ့သို့သော hola အဖြစ်သူတို့အားသုံးပြီး proxy များနှင့် VPN ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးလိမ့်မည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Netflix နဲ့ VPN ကိုသုံးစွဲသူများကအပေါ်နှိမ်နင်းမှုကိုကြေညာ” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 15 ရက်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 11.40 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Netflix ဟာတခြားနိုင်ငံကနေဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သော proxy များသို့မဟုတ် VPN များသည်အဖြစ် tools တွေကိုအသုံးပြုကြသော subscriber များအားနှိမ်နင်းဖို့အစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည်.
ထိုသို့ပွုအသုံးပြုသူများကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုအများကြီးပိုကြီးရွေးချယ်ရေးမှ access ကိုပေးသည်, ဒါပေမယ့်ဝန်ဆောင်မှု Netflix ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုချိုး - အဖြစ်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူ Netflix သည့်သဘောတူညီချက်များခြိုးဖောကျ.
ကြေညာချက်ထဲမှာ, Netflix နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါဝိဒ်သည် Fullagar ကပြောပါတယ်: "တချို့အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေပြင်ပမှာရှိနိုင်ပါခေါင်းစဉ်ဝင်ရောက်ဖို့ proxy များသို့မဟုတ် 'Unblock' 'ကိုသုံး. ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်, ကျွန်တော်တို့ကတခြားကုမ္ပဏီတွေပြုပါတူညီတဲ့သို့မဟုတ်အလားတူအစီအမံ employ. ဒီနည်းပညာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်ငါတို့သည်နှင့်အတူပြောင်းလဲနေကြတယ်.
"ဒါကလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဆိုလိုသည်, proxy များနှင့် Unblock သုံးပြီးသူတို့အားသာသူတို့လက်ရှိနေရာတိုင်းပြည်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်လိမ့်မည်. ငါတို့သည်ဤပြောင်းလဲမှု proxy များကို အသုံးပြု. မအဖွဲ့ဝင်များ impact မည်မဟုတ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
proxy များနှင့် VPN များသည်နောက်ဆုံးမှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရှေ့တော်၌တတိယပါတီမှတဆင့်သောလမ်းကြောင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက် tools တွေကိုများမှာ. သူတို့ကအများအား IP address ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်, ဤသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာ, ဝဘ်အသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာ၏.
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကို Netflix ဟာသုံးစွဲသူတွေကိုအကြားလူကြိုက်များ, အမေရိကန်အထူးသဖြင့်သူတို့အားပြင်ပမှာ, သူတို့ Netflix ဟာတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လိုင်စင်သော်လည်းမမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သိရသည်ဗီဒီယိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသောကြောင့်,. တခါတလေ, ထိုလှုံ့ဆော်မှု Netflix ဟာမှုကြောင့်ဝယ်လိုအားများမရှိခြင်းအားမျိုးစုံကိုနိုင်ငံများအတွက်လိုင်စင်မမူကြောင်းကိုမီဒီယာဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာအားဖြင့်, ကိုရီးယားထွက်ခွာသွားသူတို့ရဲ့နေအိမ်တိုင်းပြည်ကနေပြသစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပေမည်, ဝယ်လိုအားများမရှိခြင်းကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကပရိတ်သတ်များအတွက်လိုင်စင်ရကြပြီမဟုတ်သော); ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလေ့, drive ကိုရိုးရိုး Netflix ၏အမေရိကန်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်, ၎င်း၏ပိုကြီးစျေးကွက်အတွင်းမှကျေးဇူးတင်စကား, အခြားဒေသတွေထက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာမီဒီယာများ၏တစ်ဦးကိုသိသိသာသာပိုကောင်းရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်.
proxy များများအသုံးပြုမှုန်ဆောင်မှုကိုတရားဝင်စတင်မရာနိုင်ငံများရှိလည်းအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်, ကဲ့သို့ (မကြာသေးမီကသည်အထိ) သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်. သို့သော် Netflix ဟာနောက်ဆုံးမှာ proxy များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်နှိမ်နင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏တစိတ်တပိုင်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းယခုလ၎င်း၏ကြေညာချက်ဖြစ်ဟန်, တရုတ်နိုင်ငံထက်အခြားသောလူမြိုးအား, ဆီးရီးယား, မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ခရိုင်း.
Fullagar ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်လွှားလိုင်စင်အကြောင်းအရာအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်နေကြတယ် "ဟုရေးသားခဲ့သည်, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၏အဖြစ်, ယခုတှငျအ Netflix နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ် 190 နိုင်ငံပေါင်း, ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းကလူအတူတူရုပ်ရှင်နဲ့ TV စီးရီးကမ်းလှမ်းနိုင်မီဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သွားမယ့်နည်းလမ်းများရှိ.
"အချိန်ပို, ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းမျှော်လင့်. အခုအတွက်တော့, ပထဝီနယ်မြေအားဖြင့်လိုင်စင်အကြောင်းအရာ၏သမိုင်းဝင်အလေ့အကျင့်ပေးထား, ကျွန်တော်တို့ကွာခြားဆက်ကပ်တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်တွေ, အမျိုးမျိုးဒီဂရီ, နယ်မြေအားဖြင့်. အချိန်အတောအတွင်း, ကျွန်တော်တို့ပထဝီတည်နေရာအားဖြင့်အကြောင်းအရာလိုင်စင်လေးစားပြဋ္ဌာန်းရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်။ "
ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလက, Netflix ခဲ့သည် ကောလာဟလများကိုငြင်းပယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့ access ကို၏အစီရင်ခံပြီးနောက် VPN ကိုန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများအပေါ်တစ်ဦးဖြိုခွဲစတင်ခဲ့ကွောငျး. ထိုအချိန်မှာ, ကုမ္ပဏီရဲ့က "တရားမဝင်သော VPN ကိုအသုံးပြုမှုတားဆီးဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းစံနည်းလမ်းများ" ကိုအသုံးပြုခြင်းကပြောပါတယ်, နှင့် VPN ကိုသုံးစွဲသူများက၏ကျယ်ပြန့်အများစုကိစ္စများမပါဘဲဒေသ-သော့ခတ်အကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်နိုင်မှဆက်လက်.
ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးရာမှဖိအားတိုးပေးဖို့, သာအခွင့်အရေးကိုအချို့သောဒေသမူများအတွက်အခြို့သောအကြောင်းအရာ stream မှ Netflix နဲ့ပေးသနားတော်မူသောသူ, မူဝါဒအပြောင်းအလဲကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်. Netflix ဟာသမိုင်းကြောင်းအသော့ချထားသောအကြောင်းအရာဝင်ရောက်ဖို့ပေးဆောင်တဲ့သူအသုံးပြုသူများထံမှဝင်ငွေကနေအကျိုးသိရသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ယခု၎င်း၏တရာ-ပေါင်းအသစ်တပါးအမျိုးသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်များဖွင့်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကောင်းတဲ့ကစားရန်ရှိပါတယ်.
30266	0 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, မီဒီယာ, Netflix နဲ့, သတင်း, နည်းပညာ, ဝယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယို
← ဆေးခြောက်တကယ်သင့်ရဲ့အိုင်ကျူနိမ့်ပါဘူး? Microsoft ကအသစ်ပရိုဆက်ဆာကိုသာ Windows နဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် 10 [Verge] →